काठमाडौं । गायक नरेश बुढाथोकी र गायिका टीका प्रसाईको स्वरमा ‘केही हुन्न भेट हुँदैमा’गीत बजारमा आउन लागेको छ । आगामी शुक्रबार सार्वजनिक गरिन लागेको उक्त गीतको भिडियोमा राहुल शाह र मलिका मह ...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सन्देशमूलक भिडियोलाई टिकटक बनाएर ५० लाख दर्शक ‘भ्युज’ पुर्‍याउनेलाई ५० हजार पुरस्कार दिने भएको छ । ३० लाख भ्युज पुर्‍याउनेलाई ३० हजार र ...
२०७९ बैशाख ८ गते
काठमाडौं। गीतकार तथा मोडल जिम्बे राईको नयाँ गीत माया बिछट्टैको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । राईकै शब्द सिर्जनामा तयार पारिएको माया बिछट्टै बोलको गीतमा गायक प्रताप दास र गायिका प्रविशा अधिकारीको स्वर छ ...
काठमाडौं । काठमाडौंको टुँडिखेलमा शनिबारदेखि ‘राष्ट्रिय लोकदोहोरी महोत्सव-२०७८’ हुने भएको छ । आयोजक डिएआर मुभिज एण्ड फिल्मस् लिमिटेडले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महोत्सवब ...
काठमाडाैं । रनवे ड्रिम्स २०२२’ (सिजन २) को उपाधि रिसब मित्तल र स्नेहा ढकालले जितेका छन् । स्नेहाले ८ प्रतियोगीलाई पछि पार्दै महिलातर्फ र रिसम १० प्रतियोगीलाई पछि पार्दै पुरूषतर्फको शीर्ष उपाधि ...
साइबर सर्कल विभागको आयोजनामा ‘निर्वाचन र नेकपा एमाले’ टिकटक भिडियो प्रतियोगिता हुँदै
काठमाडौं । नेकपा एमालेसम्बद्ध साइबर सर्कल बिभागले निर्वाचन केन्द्रीत टिकटक प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । साइबर सर्कल विभागले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ६ लाख रुपैयाँ राशीको पुरस्कारसहितक ...
अध्यक्ष ओलीद्वारा शर्ट मुभी प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार वितरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले एनवाइएफ शर्ट मुभी प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । उक्त प्रतिस्पर्धामा प्रश्न भन्ने शर्ट मुभी उत्कृष्ट घोषित भएको छ । उत्कृष्ट ठहरिएका शर्ट मुभीलाई नेकपा एमालेका अध् ...
भैरहवाका भुपेन्द्र भए नेपाल आइडल- ४ विजेता
भैरहवा । नेपाल आइडल सिजन ४ काे विजेता भैरहवाका भुपेन्द्र थापा भएका छन् । एपी वान च्यानलबाट गायन प्रतिभा चाैथाे संस्करण नेपाल आडलमा टप ५ मा पुगेका भुपेन्द्रले सबैभन्दा बढी मत ल्याई विजेता बन ...
अभिनेता पल शाह प्रहरी नियन्त्रणमा
२०७८ फागुन १५ गते
तनहुँ । एक चल्तीकी गायिकाले बलात्कारको अभियोग लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि अभिनेता पल शाह जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ पुगेका छन् । उजुरी परेपछि प्रहरीका सबै निकायले खोजी गरेका शाह आइतबार जिल्ला प्र ...
रहेनन् चर्चित लोक गायक जयनन्द लामा...
काठमाडौं । लोक गायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन भएको छ ।लामा आज (बुधबार) बिहान मध्यपुरथिमी नगरपालिका वडा नं. १लोकन्थलीस्थित घरको गेटमा गाडीबाट लडेको अवस्थामा उनी मृत फेला परेको जनाइएको छ । महानगरीय ...
रहेनन् भारतीय चर्चित संगीतकार बप्पी लाहिरी
२०७८ फागुन ४ गते
नयाँ दिल्ली । भारतका चर्चित संगीतकार बप्पी लाहिरीको निधन भएको छ । आफ्नो डिस्कोबीट्सका लागि परिचित लाहिरीको ६९ वर्षको उमेरमा गएराति मुम्बईको एकअस्पतालमा निधन भएको हो । स्वास्थ्यसँग सम्बन् ...
दीपेन्द्रको निर्देशनमा नम्रताको कथामा ‘वरदान’ रिलिज
काठमाडौं । अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र अभिनेता दयाहाङ राईको मुख्य भूमिका रहेको सर्ट फिल्म ‘वरदान’ रिलिज भएको छ । निर्देशक दीपेन्द्र लामाको लेखन र निर्देशन रहेको फिल्म गज्जब टिभीयुट्युब च्य ...
गायिका लता मंगेशकरको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक, पुनः भेन्टिलेटरमा राखियो
२०७८ माघ २२ गते
मुम्बइ । बलिउडकी गायिका लता मंगेशकरको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको छ । केही दिनयता स्वास्थ्यमा सुधार देखिए पनि अहिले पुनः समस्या भएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । समाचारअनुसार उनको मुम्बईस्थि ...
समलिंगी भूमिकामा पल शाह
काठमाडौं । समलिंगी प्रेम सम्बन्ध, बिहे अनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण लाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको सामाजिक सन्देश बोकेको म्युजिक भिडियो ‘भतभती पोल्छ’ सार्वजनिक भएको छ । यस गीतमा यु ...
रहेनन् वरिष्ठ साहित्यकार 'भाइसाब'
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिमका वरिष्ठ साहित्यकार वासुदेव भट्ट (भाइसाब) को ७८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । भीमदत्त नगरपालिका–१८ कटानस्थित आफनै निवासमा आइतबार राति उनको निधन भएको हो । साहित्यकार भट्ट ला ...
नेपाल सांगीतिक संघमा पुनः मिलन मोक्तान, महासचिवमा बैरागी
काठमाडौं। नेपाल सांगीतिक संघमा मिलन मोक्तान पुनः अध्यक्षतामा निर्वाचित भएका छन् । सांगीतिक संघको आइतबार भएको २२ औं साधारणसभाबाट मिलनको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । मिलन यसअघि पन ...
ठमेलको एलओडीमा घन्किने भए इन्डियन आइडल पवनदीप
काठमाडौं । चिसो काठमाडौँलाई तताउन इन्डीयन आइडल ‘पवनदीप राजन’नेपाल आउने भएका छन् । नेपालकै उत्कृष्ट मानिएको ‘एलओडी’क्लबमा आगामी माघ १ गते प्रस्तुती दिने छन् । पवनदीपले क्लबका प ...
पोखरा । मुलुकका सातवटै प्रदेशमा आयोजना हुने गरी सुरु भएको सप्तरंग साँझको गण्डकी संस्करण आज शुक्रबार हुँदैछ । पोखराको अमरसिंह मैदानमा हुने कार्यक्रममा आधा दर्जनभन्दा बढीख्यातिप्राप्त कलाकारले प्र ...
काठमाडौं । गीतकार राजेन्द्र थापालाई नवौं म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्ड २०२१ मा ‘दीर्घ साधना सम्मान’ प्रदान गरिने भएको छ । म्युजिक खबर डटकमले आयोजनागर्न लागेको कार्यक्रममा ‘पोहोर साल खु ...
गोर्खा वारियर–२’का अभिनेता चाम्स घाइते
२०७८ पुस १ गते
काठमाडौं । नेपाली फिल्म ‘गोर्खा वारियर–२’का अभिनेता रितेश चाम्स गम्भीर घाइते भएका छन् । यो चलचित्रको छायाँकनको क्रममा भिरबाट लडेर उनी घाईते भएका हुन् । उनको सिन्धुलीस्थित सिन्धुली प ...
दिपकराजको प्रश्नः 'कुन्तीजी फिल्म खेल्न सजिलो छ भनेर कस्ले भन्यो, एकपटक ट्राइ गर्नुहुन्छ ?
काठमाडौं । कलाकार दीपकराज गिरीले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा महिला महामन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिएकी रेखा थापालाई शुभकामना दिँदैकेही प्रश्न समेत गरेका छन् । गिरीले सामा ...
प्रमोदको ‘खै कसरी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा सजिएको ‘खै कसरी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । जेजी क्रियशन युट्युब च्यानलमार्फत निर्माण गरिएको गीत आज सार्वजनिक गरिएको हो । प्रवासमा रहेर नेपाल ...
निर्माणसँग गरिन् प्रविशाले विवाह
लामो समय देखि प्रेममा रहेका गायिका प्रविशा अधिकारी र निर्माण सिटौला बिबाह बन्धनमा बाधिएका छन् । प्रविशा र निर्माण केही समयदेखि प्रेममा थिए । २ मंसिरमा उनीहरूले इन्गेजमेन्ट गरेका थिए । अमेरिकामा बस्ने ...
ललितपुर ।ललितपुर महानगरपालिका १६ वडा कलाकार समितिको आयोजनामा भएको १६ वडा ब्यापिं गायन प्रतियोगिता स्वनिम्हका सक्षम शर्माले जितेका छन् भने नृत्य प्रतियोगिता न्याधलकी श्रुयति शाक्यले जित हासिल ग ...
काठमाडौँ । हेटौडाकी एलिना पुरी ‘स्टार अफ द मिलिनियम २०२१’ को विजेता बनेकी छन् । पुरी ‘बेष्ट ट्यालेन्ट’, भ्युवर च्वाइस’ उपाधि सहित शिर्ष उपाधि हात पार्न सफल भएकी हुन् । प ...
पोखरा । ‘पहिलो दोहोरी च्याम्पियन’को उपाधि प्रकाश पराजुली र मीना बुढाथोकीको जोडीले उचालेको छ । पोखरास्थित फेवाताल किनारमा शनिबार साँझ सम्पन्न ‘फाइनल’ सो जोडीले उपाधिस ...
करिश्माले गरिन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बिशेष भेट
काठमाडौँ ।अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भेटेको जानकारी गराएकी हुन् । तस्बिरसहित स्टाटस् लेख् ...
स्वरा भास्करमाथि साइबर यौन उत्पीडन
मुम्बई ।बलिउड अभिनेत्री स्वरा भास्करले दिल्लीको वसन्त कुञ्ज नर्थ थानामा एफआईआर दर्ता गराएकी छन् । उनले ट्वीटर र युट्युबमा सक्रिय एक व्यक्तिले स्वराको फिल्मको एक दृश्य सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आफ्नो पहि ...
दीपक श्रेष्ठको निर्देशनमा तयार भएको ‘आकाशको जुन’ सार्वजनिक
काठमाडौं–नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई तीन दर्जन फिल्म दिएका निर्माता तथा निर्देशक दीपक श्रेष्ठको निर्देशनमा तयार भएको ‘आकाशको जुन’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ व ...
‘स्पेल बी’ को चौथो सिजन आजबाटकान्तिपुर टेलिभिजनमा
काठमाडौं । भूषण दाहालले चलाउने कार्यक्रम ‘नेपाल स्पेल बी’को चौथो सिजन आजबाट कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने भएको छ । शब्दावली सम्बन्धी कार्यक्रम ‘कोलगेट नेपाल स्पेल ...
भीमफेदीको च्यानलमा‘कचिला सुन’
काठमाडौं । जीवनकुमार सुनुवारको शब्द संगीत तथा सुनिल दोङ लामा र जितु लोप्चनको स्वरमा रहेको तामाङ सेलो ‘कचिला सुन’ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजानिक भएको छ । जीवनको प्रस्तुति तथा भूमिका ...
काठमाडौं । अभिनेत्री एवं मोडल अनामिका चौलागाईं अब गायिका भएकी छिन् । बिभिन्न चलचित्रसहित म्युजिक भिडियोकी मोडल अनामिका चौलागाईंले ‘माया गर्ने मान्छेले कहिलेकाँही रिसाउन नि पाउँछ’ बोल ...
प्रियंका बनिन् छोरी आयंकाकी आमा
काठमाडौं । नायिका प्रियंका कार्कीले छोरी जन्माएकी छिन्। बुधबार सामाजिक संजालमार्फत् तस्वीर सार्वजनिक गर्दै आफू छोरीकी आमा बनेको प्रियंकाले जानकारी दिएकी हुन् । सामाजिक संजालमा उनले श्रीमानसँग छोरी का ...
काठमाडौं । हाँस्य कलाकार रमेश केसीको निधन भएको छ । उनको आज बिहान ९ बजे गीत छायांकनको सेटमा निधन भएको कलाकार उत्तम केसीले जानकारी दिए । हर्के हवल्दारको टिमले बनाउन लागेको एक भिडियोको छायांकनका क्रममा ...
कमेडी च्याम्पियनको फाइनल आज
काठमाडौं । कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ को विजेता आज घोषित हुँदैछ । आज साँझ नियमित समय र सेटमै ग्रान्ड फिनाले सुरु हुने जनाइएको छ । साँझ ९ बजेबाट कार्यक्रम सुरु हुनेछ । “९ बजेदखि कार्यक्रम सुर ...
काठमाडाैं । संसारकै दोस्रो ठूलो फिल्म उद्योग मानिने बलिउड भारतीयझैँ नेपाली कलाकारका लागि पनि सपना हो । बलिउडमा काम पाउने सपना बुनेर वर्षैपिच्छे त्यहाँ पुग्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ । केही कलाकार ...
काठमाडौ । नेशनल बक्स अफिस तिज अवार्ड-२०७८ सम्पन्न भएको छ। बक्स अफिस इन्टरनेसनल ग्रुपको आयोजनामा आर्थिक बर्ष २०७७ र ७८ मा रेकर्डिङ भई भिडियो निर्माण गरी सार्बजनिक भएका तिज गीत संगीतलाई समेट्दै क ...
काठमाडौं । अभिनेत्री ऋचा शर्मा आमा बनेकी छन् । पहिला सन्तानका रुपमा उनले छोरालाई जन्म दिएकी हुन् । ऋचा संलग्न टिभी रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनले उनी आमा बनेको पुष्टिसहित सामाजिक सञ्जालमा बधाइ दिएको ...
काठमाडौं । चर्चित मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको उपचारका क्रममा निधन भएको छ । मोडल घिमिरेको उपचारका क्रममा बुधबार साँझ मृत्यु भएको हो । घिमिरेको आज साँझ ६ः५१ बजे मृत्यु भएको नर्भिक अस्पतालले जनाए ...
रहेनन् जनताका गायक जेबी टुहुरे
२०७८ भदौ १० गते
काठमाडौं । जनगायक जुठबहादुर खड्गी (जेबी) टुहुरेको निधन भएको छ । टुहुरेको ७८ वर्षको उमेरमा बयोधा अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहीबार निभन भएको हो । मंगलबार कलंकीस्थित घरमा एक्कासी लडेपछि बयोधा अस्पत ...
सुगम र सुष्माको स्वरमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’
काठमाडौं । चर्चित गायक सुगम पोखरेलको स्वर भएको ‘म यस्तो गीत गाउँछु’को म्युजिक भिडिओ शुक्रबार रिलिज हुने भएको छ। राज कटुवाल र बर्षा सिवाकोटीको अभिनय गरेको म्युजिक भिडिओको निर्देशन राम ...
कोरोनाबाट बरिष्ठ हास्यकलाकार थापाको निधन
काठमाडौं । हास्यकलाकार शम्भुराज थापा ‘बखते’को निधन भएको छ । कोरोना संक्रमण पुष्टी भएपछि पाटन अस्पतालमा भर्ना गरिएका थापाको शनिबार विहान ४ः४० बजे उपचारकै क्रममा निधन भएको कलाकार जीवन थापाल ...
शान्तिश्री र अञ्जलीका साथ परिश्रमीको 'यो तीजमा फिलीली नाचम्ला' (भिडियोसहित)
काठमाडौं । गीतकार डीपी दाहाल परिश्रमीले नेपाली नारीहरुको महान् चाड तिजको अवसरमा यो तिजमा फिलीली नाचम्ला बोलको गीतको भिडियो डिलाईटेड युटुब च्यानलमार्फत बजारमा ल्याएका छन् । अहिले निकै चर्चामा रहेकी मि ...
छोटो समयमै ग्राहकको मन जित्न सफल अल वेय पोईन्ट रेष्टुरेन्ट
कोरोना महामारीका कारण अस्तब्यस्त पर्यटन श्रेत्र लागि थोरै भए पनि चलायमान बनाउने प्रयास स्वरुप भक्तपुरको धार्मिक एबम् ऐतिहासिक नगरी सुर्यबिनायक नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने अन्तलिङग्रेश्वर मन्दिरसँगै संचाल ...
मदन घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘आँधी तुफान २’को छायांकन पुरा
काठमाडौं । मदन घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘आँधी तुफान २’को छायांकन पुरा भएको छ । एक पात्रको हत्याको अनुसन्धानमा परिचालित तीन युवतीको कथा समेटिएको फिल्म ‘आँधी तुफान २’ को छाया ...
काठमाडौं । फिल्मी पर्दामा पछिल्लो समय रुचाइएका जोडी पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको सम्बन्ध चिसिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि निकै नजिक रहेका पूजा र आकाशको सम्बन्धमा चिसोपना आएको पूजा स्वयंले एक टेलिभ ...
काठमाडौं । अभिनेता पल शाहलाई ‘रियल हिरो अफ दि इयर’बाट सम्मानित गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार बनेका चलचित्रकर्मीहरुलाई राहत सहयोग गर्न सुरु गरिएको ‘रजतपट कोशेली अभियान&rs ...
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पीडित गायक एवं संगीतकार दीप श्रेष्ठलाई संगीतकार संघ नेपालले २ लाख रुपैयाँसहयोग गरेको छ । कोरोना संक्रमित भएपछि दुई साताको अस्पताल बसाइसकेर गायक श्रेष्ठ केही दिन अ ...
कोरोना जितेका मदनकृष्णले जिते अर्को गम्भीर बिरामी, मुटुको समस्यापछि ५ दिन बसेर गंगालालबाट डिस्चार्ज
काठमाडौं । बरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ गंगालाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । गत शुक्रबार राती एक्कासी छाती दुखेपछि अस्पताल भर्ना गरिएका कलाकार श्रेष्ठ आज (बुधबार) डिस्चार्ज भएको उनका छोरा य ...
काठमाडौं । बालबालिकादेखि बृद्धसम्मका लागि लोकप्रिय पात्र ‘इकु’ दर्शकले फेरि हेर्न पाउने भएका छन् । हाँस्यश्रृखला ‘इकुपिताङ’मार्फत ‘इकु’लाई सानोपर्दामा देख्न प ...